အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: April 2008
Posted by Pyiet Oo Aung at 7:01 PM 35 comments:
p.s- ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မေမေ့ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် မေမေချစ်တဲ့ မိသားစု နှင့် အတူ ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ပါစေလို့ သားဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 4:46 AM 14 comments:
သိကြာင်းမင်းသည် နှစ်စဉ်ထမ်းဆောင်နေကြ တာဝန်အား ထမ်းဆောင်ရန်အလို့ငှာ ထုံးစံအတိုင်း လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်…။ ယခင်နှစ်များနဲ့ မတူပဲ ဒီနှစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ လောင်စာဆီများ အဆမတန် ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ယဉ် ကျေးမှုကို ဖော်ပြ လိုသည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ယခုနှစ်မှာတော့ အရင်လို စက်တပ်ယဉ်များကို အသုံးမပြုတော့ပဲ လှည်းယဉ် ကိုစီးကာ ညာဘက်လက်တွင် သင်္ကြန်အတွင်း မကောင်းမှု ကျူးလွန်သူ များအား မှတ်တမ်းတင်ရန် HTC (TYTN II) model အမျိုးအစား PDA ကို ကိုင်ဆောင်ပြီး လည်း ကောင်း၊ ဘယ်ဘက်လက်တွင် သင်္ကြန်အတွင်း ထင်တိုင်းကျဲနေကြသော မြန်မာ(ဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် နာမည်တပ်ထားသော) လှပျိုဖြူလေးများရဲ့ ရေစိုနေသော အလှအား မှတ်တမ်းတင်၍ နတ်ပြည်တွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရန် အတွက်လည်းကောင်း Sony- Handy Cam တစ်လုံးကို ကိုင်ဆောင်၍ ဆင်းသက်လာခဲ့လေသတည်း..။
Appendix (1) - သိကြားမင်းသည် ၎င်း၏ Video Camera ဖြင့် လူ့ပြည်ရှိ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်သူများ အား မှတ်တမ်းတင်ရန်ဟု အကြောင်းပြကာ ၎င်း၏ ချစ်ဇနီးချောလေးများအား မလိမ့်တပတ်ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း ခိုင်လုံ သော သတင်းရပ်ကွက်မှ သတင်းရရှိ။
သိကြားမင်းသည် ခရီးရောက်မဆိုက်ပင် ၎င်းမရောက်ခင်ကတည်းက အလိုအလျှောက် အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်နေသော သင်္ကြန်ပွဲတော်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်များကို အမောတကောပင် အင်တာနက်ကွန်ယက် အကူအညီများယူရ လိုက်လံမှတ်တမ်းတင်ရပါတော့တယ်..။ ကွန်နက်ရှင်မှာလည်း သင်္ကြန်အတွင်း မကောင်းတစ်ချက်၊ ပျက်တစ် ချက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုလိုသော Website တော်တော်များများမှာ Access Denied နှင့် တိုးနေသောကြောင့်လည်းကောင်း တာဝတိသာမှာရှိတဲ့ ၎င်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ISP နဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခဲ့ရပါ တော့တယ်..။ ထိုကဲ့သို့ တာဝတိသာနှင့်ချိတ်ဆက်ရာတွင်လည်း သာမန်နည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်လို့ မရတာ ကြောင့် Proxy များကို ကျော်ခွ အသုံးပြုခဲ့ ရပါတယ်..။
ယခုနှစ်တွင် သိကြားမင်း၏ အဓိကတာဝန်ကတော့ နတ်သဘင်အစည်းအဝေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ မြန်မာပြည်တွင် အလွန်ခေတ်စားနေသော Blogger များရဲ့သတင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများကို အထူးဦးစားပေး မှတ် တမ်းတင်ရန်နှင့် နတ်ပြည်မှာ မကြာခင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော့မယ့် Blogger Society အတွက် နည်းပညာ များရယူရန်တို့ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်များအပြင် အထူးလျှို့ ၀ှက်တာဝန်အဖြစ် လူ့ပြည် Blogger အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သင်္ကြန်တွင်း ဥပုဒ်သီလဆောက်တည်နေသော သူတော်ကောင်း Blogger များအား အရက်သမား၊ ဖဲသမား ဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုး အပုတ်ချ၊ လီဆယ် ဖန်တီးနေသည့် Blogger ရာဇ၀တ် သားများရဲ့ မှတ်တမ်းများကို၎င်း၏ PDA တွင် သေသေချာချာ မှတ်တမ်းတင်ပြီး နတ်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa ပိတ်ခြင်း ဖြင့် အရေးယူသွားရန် အစီအစဉ်များပါဝင်ခဲ့ပါတယ်…။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သိကြားမင်းသည် နတ်ပြည်တွင် မကြာမှီ တည်ထောင်မည့် Blogger Society အတွက် လူ့ပြည်မှ နာမည်ကြီး Blogger များကို လူယောင်ဖန်ဆင်းပြီး တွေ့ဆုံပါတော့တယ်..။ ၎င်း အနေဖြင့် ထိုသို့ တွေ့ဆုံမည်ဟု ရည်ရွယ်ထားကတည်းက မဖြစ်မနေနှင့် ထိပ်ဆုံးမှ လေ့လာရမည့်သူ ကို ကြိုတင်ရွေးချယ် ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်..။ ထိုသူနှင့်မှ မတွေ့ဆုံပါက Blogger ရပ်ဝန်းတွင် အလွန်တရာမှခေတ်နောက်ကျသွားပြီး.. လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ များကို အဆက်အသွယ်ပျက်သွား နိုင်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနာမည်ကြီး Blogger နာယကကြီးကတော့ ကိုစိုးထက် ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် သိကြားမင်းဟာ ကန့်ကွက်မဲမရှိပဲ အတည်ပြုထားတဲ့ အထူးလျှိှု့ဝှက် စီမံကိန်းအား အကောင် အထည်ဖော်ရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်..။ သိကြားမင်းသည် နတ်တို့၏ အစွမ်းဖြင့် အလွယ်တကူ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဟု ယူဆထားသောလည်း Blogger အများစုသည် Proxy များကိုကျော်ခွပြီး အသုံးပြု နေခြင်းကြောင့် တော်တော်ပင်အခက်အခဲ နှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။ IP Address အရ အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာဟု ယူဆကာ ထိုနိုင်ငံသို့ အမောတကောလိုက်သွားပြီးတော့မှ တကယ်တမ်း အသုံးပြုနေသည်မှာ ၎င်းစတင်ဆင်း သက်ရာနိုင်ငံမှ ဖြစ်နေခြင်း အစရှိသော အခြေအနေအမျိုးမျိုးဖြင့် အလှည့်စားခံနေရသောကြောင့် သိကြားမင်းခမြာ ယုန်တောင်ပြေး ခွေးမြောက်လိုက် အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရပါတော့တယ်..။
သို့သော်လည်း နတ်တို့ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ Blogger လူဆိုးကြီးများ သတင်းကို ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များ နှင့်အတူ စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…။
သင်္ကြန်အတွင်း သူတော်ကောင်း Blogger များဘာဝနာတရားပွားများ အားထုတ်နေချိန်တွင် Chevas ပုလင်းကို ဖက်ကာ ရွှေရောင်ပင်လယ်ထဲကူးခတ်နေသော ကိုလင်းထက်၊ Blog တကာလှည့်ကာ Blog ကြီးတစ်ခုလုံး ရေထဲစုံးစုံးမြုပ်တဲ့အထိ မီးသတ်ပိုက်နှင့်လိုက်ထိုးခြင်း၊ အိုးမဲသုတ်ခြင်း (သူတို့က မဲပြီးသားသူတောင်မချန်ဘူး) အစရှိသော အမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နှလုံးသားပြတိုက် နှင့် မောင်မျိုး၊ တွေ့သမျှ Blog အကုန်ဝင်၍ သူမရဲ့ အသံဖြင့် လိုက်လံနှိပ်စက်ခဲ့သော စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်၊ သူ့ကိုယ်သူ အသည်းကွဲသမားလိုလို ဘာလိုလို လေသံပြစ်ပြီး သင်္ကြန်ပြီးတာနဲ့ အိုရတော့မယ့် နွေမုန်တိုင်း နှင့် အစ်ကို Blogger များအား အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ အမျိုးမျိုးစိတ်ကောက်ပြီး သင်္ကြန်တွင်း ကောင်မလေးများနှင့် ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေသော ညမီးအိမ် တို့အား လှည့်စားမှု၊ နှစ် ယောက်ပေါင်းပြီး Blogger အပေါင်းအား နည်းမျိုးစုံလိုက်ကြပ်နေသော အိမ်လေး နှင့် ပန်းခရေ၊ မနှစ်ကသင်္ကြန်မှာ အသည်းကွဲခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ဒီနှစ်သင်္ကြန်တွင်း တစ်တွင်းလုံး Blogger ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများအား ပြစ်ကာ ရှာပုံတော်ဖွင့်နေသည့် ပေါက်ကရ ၈၀ အား အခွင့်အရေး လက်တစ်လုံး ခြားလုပ်မှု တို့ဖြင့် ၎င်း၏ PDA အတွင်း အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ပြီး နတ်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa အား သံသရာ သက်ပန် ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်..။
p.s - သိကြားမင်းသည် လူယောင်ဖန်ဆင်း၍ ကိုစိုးထက် ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် Black Dream ဆိုသော အမည်အားအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း….။
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:27 AM 30 comments:
မနေ့က (၁၃.၄.၀၈) သင်္ကြန်အကျနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာအတူတူရှိနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်း (Blogger)တွေ ပထဆုံးအကြိမ် စုံစုံလင်လင် ဆုံဆည်းခဲ့ကြပါတယ်..။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ သူများတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ပျော်ပါးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လည်း အမှတ်တရလေး ဖြစ်သွားအောင် အခုလိုဆုံကြဖို့ စီစဉ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်…။
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုလေးဟာ အပျော်သဘော အမှတ်တရ သဘောမျိုး တစ်ခုတည်း အတွက် သီးသန့်မဟုတ်ပဲ မကြာခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီး တည်ထောင် ကြမယ့် Website လေးတစ်ခုအကြောင်းကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်…။ အဲဒီ့ Website လေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တတ်သမျှ၊ သိသမျှ နည်းပညာအကြောင်းအရာများ၊ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ များနဲ့အတူ အခြားသော အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဏများကို ထည့်သွင်းသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆုံဆည်းမှုရဲ့ ပထမခရီးစဉ်အနေဖြင့် Парк Культуры (Park Of Cultre) လို့ ခေါ်တဲ့ ပန်းခြံကို ပထမဆုံးစတင်ချီတက်ကြပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀မ်းတွင်းသာယာစိုပြေရေးကိုလည်း အဲဒီ့နေရာမှာပဲ ဖြေရှင်းပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်..။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Красная Плошадь (Red Square) ကို ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး… မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမှတ်တရ ဆုံဆည်းမှုလေးမှာ ထူးဆန်းမှုလော တိုက်ဆိုင်မှုလောမသိတဲ့ အဖြစ် အပျက်လေးတစ်ခုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်..။ ဘာလဲဆိုတော့ မိုးရွာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ နေရာမှာ ဒီလိုအချိန်မျိုးမိုးရွာလေ့ ရွာထမရှိပါဘူး။ ဘာလို့ ကျွန်တော်က မိုးရွာတာကို အထူးအဆန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရကြောင်းကို သိချင်ရင်တော့ အခုကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်မှာ ပါတဲ့သူများကိုဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ တစ်နှစ်တည်း ကျောင်းအတူတူ တက်ခဲ့ကြတဲ့ တစ်ခြား သူငယ်ချင်းများကိုပဲ မေးကြည့်လိုက်ကြပါတော့ :) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုံဆည်းမှု အမှတ်တရနေ့ရက်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ စာဖတ်သူများ၊ Blogger ညီအစ်ကိုများ၊ မောင်နှစ်များအားလုံးကို ဝေမျှရင်းနဲ့ “မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ၊ပြည်သားများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေရန် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…။ ထို့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည်လည်း ယခု ထက်ပို ပိုမို၍စည်ပင် သာယာဝပြောပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။”
Moscow River နဲ့ အမှတ်တရ...
(Park Of Cultre) ထဲမှာပါ...
ဒါကတော့ ပန်းခြံအ၀င် ဂိတ်ဝမှာပါ...
Moscow River ကို တံတားပေါ်ကနေ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ...
Red Square နားမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်က အမိမြန်မာပြည် မြေပုံရှေ့မှာပါ...
ရေမလာတဲ့ ရေပန်းကြီးဘေးမှာပါ... :P << ရေလာရင်တော်တော်လှပါတယ် :) >>
p.s- ပါဝင်သူများ မျှားပြာ၊ ညိမ်းညို၊ မောင်ကောင်းအောင်၊ မင်းကျန်စစ်၊ တင့်ထူးရွှေ၊ နတ်ရှင်နောင်၊ ကိုရင်ညိန်း၊ BLACK DREAM
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:45 AM 30 comments:
Everybody It's သင်္ကြန် Time!!!!!!! Let's Rock & Roll!!
p.s- This song was really mean to me and i used to listen this song every years when this time is come. So turn your speakers as loud as possible and let's rock & roll for our New Year!! Wish you all the best in this very HAPPY NEW YEAR!!!!
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:51 PM 10 comments:
ကျွန်တော်တို့လမ်းပေါင်းများစွာ လျှောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်…။ အခုလည်း ကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်စီ လျှောက် လှမ်းနေကြပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ်လည်း လမ်းပေါင်းများစွာကို ဆက်လက်လျောက် လှမ်းရဦး မှာဖြစ်ပါတယ်…။ ထိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ရသောလမ်းများသည် တစ်ချို့နေရာများတွင် အလွန် ပင်ပန်းခက်ခဲ စွာလျှောက်လှမ်းခဲ့ရပါတယ်..။ တစ်ချို့သောနေရာများတွင်တော့ သာမန်အားစိုက် ထုတ်မှုမျိုးလောက်နဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အလွန်သာယာဖို့ကောင်းတဲ့ လမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ တောင်ပေါင်းများစွာလည်းတတ်ခဲ့ဖူးကြ ပါတယ်။ ကုန်းဆင်း တော်တော်များများကိုလည်း အသာတကြည်ပဲ လှိမ့်ဆင်းခဲ့ကြဖူးမှာပါ..။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပုံစံအမျိုးမျိုးသော လမ်းများကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖြတ်သန်းလျှောက်လှမ်း ခဲ့ကြ ခြင်းပါပဲ...။
ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လှမ်းခဲ့သောလမ်းများတွင် ဦးတည်ချက်အတိအကျရှိသော လမ်းများလည်းရှိပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ဘယ်ကိုသွားလို့သွားနေမှန်းမသိတဲ့ လမ်းမျိုးတွေကိုလည်း ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မှာတော့လည်း ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာပင် လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်သွားတတ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဦးတည်ချက် အတိအကျရှိသော လမ်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လှမ်းစဉ်တုန်းမှာအင်အားတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ တက်ကြွလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်ကိုရောက်လို့ ရောက်မယ်မှန်းမသိတဲ့ လမ်းမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ လျောက်လှမ်းကြတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေဟာ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ ခပ်ရေးရေးသာ ရှင်သန်ခဲ့ကြ ပါတယ်..။ မထင်မှတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်ခုရဲ့ ဦးတည်ရာလွဲချော်ခဲ့စဉ်တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲခဲ့ကြဖူးပါတယ်..။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လျှောက်နေကြပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လျှောက် ကြရအုံးမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်…။
တစ်ခါတစ်လေကြရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်လျှောက်ရမယ့်လမ်းကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ လမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်..။ ဒီလောကရဲ့ လမ်းများတွင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ “ကံ” များဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေကြရင် “ကတ္တား” ဖြစ် သွားလေ့ရှိပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ သတိထားမိလိုက်တာတွေလည်း ရှိခဲ့သလို..။ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိလိုက်တာတွေလည်း များစွာရှိနိုင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်မှီ ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်များ ရှိခဲ့သလို..။ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့် နောက်ကျ ခဲ့ရခြင်း..။ ဆုံးရှုံးခြင်းများကိုလည်း ကြုံတွေ့ကြရဖူးပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထိုလမ်းများကို မိမိဆန္ဒအရ လျှောက်ခြင်လို့ လျှောက်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မလျှောက်ခြင်ပဲ လျှောက် လှမ်းရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှတော့ တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားအရ လျှောက်လှမ်းရပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ တွန်းအားအမျိုးမျိုးကြောင့် လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြရပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ ထိုကဲ့သို့လမ်းတွေကို လျှောက်ကြရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကလည်း များပြားလှပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေအလွန်သာယာလှပတဲ့ လောကရဲ့ကောင်းခြင်းတစ်ရားတွေကို တွေ့ရှိရတာ မျိုးရှိသလို။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ လောကရဲ့ အနိဌာရုံတွေကို ၀မ်းနည်းဖွဲရာတွေ့ကြုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကံကောင်းခဲ့ရင်တော့ မြတ်နိုးတွယ်တာဖို့ကောင်းတဲ့ နွေးထွေးသော လက်တစ်စုံကို ရရှိကြပါတယ်..။ တစ်ချို့ သောအရာများသည် ကျွန်တော်တို့ ခရီးရဲ့အစပိုင်းလောက် ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာ ထပ်ကြပ် မကွာ ပါလာခဲ့သလို..။ တစ်ချို့ကြတော့လည်း လမ်းရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ နေရာတွေကနေပေါ်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူလိုက်ပါလာလေ့ရှိပါတယ်…။ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်လှမ်းတဲ့ ဒီလမ်းခရီးရဲ့ အဆုံးအထိ အေးအတူပူ အမျှ၊ တစ်ယောက်လဲကျချိန်မှာ တစ်ယောက်က ထူမရင်း အတူပါလာခဲ့သူများရှိသလို။ နည်းအမျိုးမျိုး၊ အခြေ အနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးတွေ အဆုံးမသတ်ခင်မှာ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်း အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီခရီးကို စတင်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြစဉ်ကပင် တစ်ယောက်တည်းလျှောက်လှမ်းခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီခရီးတစ်ခုရဲ့ ဇာတ်သိမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်တည်းပင် အဆုံးသတ်ရမှာဖြစ် ပါတယ်..။ ဘယ်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာ ဘယ်လိုပဲ ရပ်တည်ပေးခဲ့ပါစေ…။ ဘယ်သူတွေ ကျွန်တော်တို့ ကို ဘယ်လိုပဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါစေ..။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခရီးအဆုံးထိ တော့သူတို့ ဘယ်လိုမှပါလာနိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး…။ သူတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်သတ်မှုဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ရှိခဲ့ကြပါတယ်..။ ကျွန်တော် တို့ မတောင်းဆိုဘဲ ဒီလမ်းမှာ လက်တွေ တွဲခဲ့ရသလို…။ တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မခွဲခြင်လည်း ဒီလက်တွဲတွေ ခွဲကြရအုံးမှာပါ..။ ကျွန်တော်တို့တွေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့ ဆုံဆည်းခဲ့စဉ်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ ကြသလို..။ မတူညီမှုတွေရှိလို့ လမ်းခွဲကြရမယ့် အချိန်အတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်…။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လျှောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေမှာ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိတော့ လျော့နည်းသွားနိုင်ပါကြောင်း….။
p.s- လမ်းခရီးတစ်ခုရဲ့ အဆုံးတွင် အခြားသောခရီးတစ်ခု၏အစသည် အမြဲတည်ရှိနေတတ်ပါသည်။
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:42 AM 14 comments:
Labels: Article, Essay
မကြာပါဘူး ကြွေလွင့်သွားတယ်…အိပ်မက်တွေ…. တစ်စစီ….။ အဲဒီ့ညပေါ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေ အိပ်တန်း တက်…။ မျှော်လင့်ချက် လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးခဲ့ရတာ…။ အနာဂတ်တွေ ဖြစ်ညှစ် စုစည်း….အဲဒီ့ မီးကိုလည်း ငါမွှေးခဲ့ဖူးပါရဲ့။ ထင်ရာတွေစိုင်း ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဒီလောကရိုင်းကြီးထဲ…နောက်ဆုံး လဲကျတော့။ ငါ….။ အိပ်မက်တွေထမ်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက် လျှောက်ရုံပေါ့။ မလာပါနဲ့…။ တားလို့ လဲမရ…..။ ခဏခဏတိုက်စားတော့ င့ါဘ၀လည်း ခံစားချက်တွေ တစ်ခြမ်းစောင်းကုန်ပြီ…။ စကားလုံးတွေက စုတ်စုတ် ပြတ်ပြတ် ယုံကြည်ချက်တွေ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ ငါ့မနက်တွေလည်း ခြစားခံရပေါင်း မနည်း တော့ဘူး …။
အိပ်မရလို့ လှိမ့်ချလိုက်တော့…..။ ကျသွားတာက ဘ၀ခါးတွေထဲ။ ခပ်ရေးရေး ထွက်ပြေးနေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေကို ငါလိုက်ဖမ်းတော့…။ ငါ့နှလုံးသွေးကြောတွေ ခပ်ပါးပါးကျဉ်းကျဉ်းသွားတယ်…။ ရှိုက်သွင်းလိုက် ငါ့အဆုတ်ထဲ….။ နာကြည်းချက် နီကိုဒင်းတွေ….။ အား…..။ ဖြေးဖြေးချင်း အဆုံးစီရင် ငါ့အာရုံတွေ လှလာပြီ…။ မျက်စိတ်ကိုမှိတ်.. အတိတ်ကိုတော့ မကြည့်နဲ့…။ ငါ့အရိပ်တွေ လေးလှပြီ။ မီးခိုးငွေ့တွေထဲလိုက်ရှာကြည့်…။ တစ်ခုခုရှိတယ်…။ တွေ့တယ်မလား...? “မမြဲခြင်းတရား”တွေ..။ ငါ့သွေးကြောထဲ…အဖြူရောင် နတ်သမီးတွေစီးဆင်း။ လွင့်မြော ခြင်းတို့ ခရီးစပြီ…။ အနိဌာရုံတွေကို ရေခဲရိုက်…။ ခေါင်းခါလိုက် ခေါင်းညိတ်လိုက်နဲ့….။ ဒီအချိန်ဆို ငါ့အတိတ် တွေ အရမ်းဂလေရိုက်ပြီ။
တရိပ်ရိပ် တက်လာတဲ့ အဖြူရောင်ဒီရေတွေမှာ…။ ငါကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုး ငါ့အိပ်မက်တွေ နိုးတော့မယ်…။ နတ်သမီးတွေ ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ ပျော်ပါး…။ ကြားရဲ့လား နိမိတ်ပုံတွေ…။ ရီဝေေ၀ တိတ်တဆိတ်…။ ကျေးဇူးပြု၍..။ ဆင်ခြင်ဥာဏ်တွေ ညအိပ်ချိန်…။ ငါ့မျက်ဝန်းထဲမှာ ကြယ်စဉ်တွေ ရွာသွန်း…။ နာနာကြင်ကြင် ငါပြုံးလိုက်တာ…။ ခံနိုင်ရည်တွေ ဆိတ်သုန်းသွားမလားပဲ..။ သံစဉ်တစ်ခု ငါ့နားထဲ ရိုက်ခတ် “ခေါ်သံလိုလို နားထဲကြားနေတယ်…သွေးကြောထဲက သိလိုက်တယ်….” ။ ငါလွင့်ထွက်သွားတယ်…။ အဆုံးမရှိပေါ့…။ ငါ့ကိုယ်ငါ မထိတထိပြန်ကြည့် ငါ့အာရုံတွေငြိနေပြီ..။ ငါ့လှေငါထိုး ငရဲအိုးထဲ ရောက်ရောက်။ ကြောက်တတ်ရင် နောက်ကို ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်။ ငါ့အိပ်မက်တော့ လာမထိနဲ့။ နေရာမှားရင်ထိုးရင် Shock ရှိတယ်…။ အဖြူရောင် နတ်သမီးတွေ ငါ့သွေးကြော ထဲလှည့်ပတ်.....။ အခုဆိုငါ့အိပ်မက်တွေတောင် တော်တော်နက်လာပြီ..။
ရုန်းလေနစ်လေ ဒီစိတ်နွံ့တွေထဲ ငါကိုယ်တိုင်ခုန်ဆင်း….။ ငါ့ဘ၀ကို ငါဖန်ဆင်းတယ်….။ သံယောဇဉ်တွေ တစ်ချောင်းခြင်းကျစ် ယုံကြည်ချက်တွေ အကြိမ်ကြိမ်နစ်လည်း…။ ငါ့ဘ၀ကို ငါသစ်ရမယ်…။ ငါ့ကိုယ်ငါဖန်ဆင်း ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ…။ ငါကိုယ်တိုင် အသက်သွင်းမယ်။ လာမပြောနဲ့…။ ကိုယ့်အိပ်မက် ကိုယ်မျိုချ….။ ငါ့ဘ၀… နောင်တဆိုတာ မရှိစေရဘူး…။ ငါ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ငါထုပ်ပိုး။ အတိတ်ဆိုး ဆိုတာမရှိစေရ…။ ငါ့သွေးကြော ငါဖောက်ထုတ်…။ ဘာမှကြားထဲက ခေါင်းရှုပ်မခံနဲ့။ ငါမိုက်လို့ငါခံ ဘာမမှန်တာရှိလို့လဲ…။ ကိုယ့်အညွန့်ကို ကိုယ်ခူးစား…။ ဘယ်သူမှ မေတ္တာလာမထားနဲ့။ အဆင်ပြေစေကြောင်း ဆုတွေတောင်းနေမဲ့ အစား...။ လာ….။ ကိုယ့်အခေါင်း ကိုယ်ထမ်းပြီး ငါနဲ့လိုက်ခဲ့…။ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ သူတို့တွေရှိတယ်….။ ငါတို့ နောက်ကျနေပြီ….။
p.s- ကျွန်တော်ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀လေးတစ်ခုအကြောင်း အမှတ်တရပါ....။
Posted by Pyiet Oo Aung at 9:09 PM 28 comments:
Everybody It's သင်္ကြန် Time!!!!!!! Let's Rock & Rol...